'इस्लाम धर्मका प्रवर्तक पनि हिन्दू नै थिए'
- स्वामी सत्यव्रत
आँखा बन्द गर्दैमा सूर्यास्त भएको हुँदैन, सूर्यलाई हत्केलाले छेकेर छेकिदैन, सत्य सत्य नै हुन्छ । इस्लाम धर्मका प्रबर्तक महमदशाहबका पुर्खाहरु ब्राह्मण थिए, भनेर उल्लेख गरेबाट पनि यिनीहरु हिन्दू नै थिए ।
ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य र शुद्र भन्ने जातको वर्णनबाट पनि मुस्लिमहरु हिन्दू नै थिए । तुलना र प्रतिष्पर्धा आफ्ना समकक्षीसित हुन्छ र खास गरेर प्रतिष्पर्धा र तुलना आफ्ना भाइ भाइमा अझ बढी हुने गर्छ आध्यात्मिकताको अभावमा । त्यसैले सनातन हिन्दू धर्म सँस्कृतिमा हुर्किएका आफ्ना साक्खै सन्तती मुस्लिम र हिन्दू आफ्नै दाइ भाइ थिए भन्ने सामान्य मानिसले पनि अड्कल लगाउन सक्ने एउटा आधार र समता के छ भने हिन्दूहरुले बली दिँदा जसरी दिन्छन् मुस्लिमहरुले विलकुल त्यसको विपरित गर्छन् ।
हिन्दूहरुले जुँगा राख्छन् मुस्लिमहरुले दारी राख्छन्, यो भाइ भाइको विरोधको कारणले विपरित कार्य गर्न थालेका हुन् । शत्रु खोज्नु परेमा आफ्नै भाइ – दाइको अनुहार हेर्नु भन्छन् नि ? भाइ मुटु खाई, भाइ कहाँ पाई, मिलेमा हुनुपर्ने भाइ – दाइ, निमेले सधैको लागि बाइबाइ । दाजुभाइ बाइबाइ होइन एकता हो तर फोहरी राजनीति अवलम्बन गर्नाले दाजुभाइ, बन्धुबान्धव सबैलाई फुटायो । धर्म र राजनीतिलाई अलग्याउने काम धर्ममा फुट ल्याउनेहरुकै हो, यसबाट सबै सचेत हुनु जरुरी छ ।
अरबमा जन्मेका पैगम्बर महमदका बाबु अब्दुल्ला र आमा अमिना थिएन् । इस्लाम धर्म अन्तर्गत सिया, सुन्नी, अहमदीया सूफी आदि पर्दछन् । महमदको जन्म ई. ५७० मा अरब देशको मक्का भन्ने ठाउँमा भएको थियो भने उनको मृत्यु मदिनामा भएको थियो । त्यसैले मक्का र मदिना विश्वभरका ईस्लाम धर्म मान्नेहरुका लागि पवित्र “हज” तीर्थ बनेको छ । लाल सागरको तटमा स्थित मक्का र मदिनामा रोजा भनेको ब्रत पनि बस्दछन् ।
मुस्लिम धर्म मान्नेहरुका लागि पवित्र ग्रन्थहरु कुरान, कुरानशरीफ, हदीस आदि छन् । मक्कामा प्रशस्तै हिन्दू सनातन धर्म सँस्कृतिसँग सम्बन्धित देवी देवताका मूर्तिहरु राखिएका छन् । देवी देवताहरुले बोल्दैनन्, क्रिया प्रतिक्रिया गर्दैनन्, त्यसैले भाइ भाइ हिन्दू र मुस्लिमले यी मूर्तीहरुलाई आप्mनो पैत्रिक सम्पत्तीको रुपमा बाँडेको हुनु पर्छ ।
अहिले मक्कामा स्थित कालो पत्थर (ढुङ्गा) मा ईस्लामहरु छाती लगाएर अँगालोमा लिन्छन्, त्यो मक्केश्वर शिवलिङ्ग थियो । देवादिदेव महादेशलाई नै आराध्यदेव मानेर पूजा गर्ने र त्यो कुरा हिन्दूहरुको सामु नखोल्ने जस्तो हीन मानसिकताको चोरी भएको छ त्यहाँ । अब उनीहरुको धर्ममा कति दम होला । मलिक मुहमद, रहीम र रसखान त पूर्ण रुपमा कृष्णभक्त नै थिए । हिन्दूहरुले नै विश्वमा अहिले प्रचलित देशहरुमा अध्यात्म र धर्मको प्रचार प्रसार गरेका थिए । महादेव मनुष्यमात्रमा देवता भएकोले कसैले पनि मान्न पाउँछन् तर देवादिदेव महादेवको जन्म थलोलाई र उहाँको असिम करुणा र आदर्शलाई तोडमोडर गरेर काम गर्ने अधिकार भने देवता, मानव, दानब कसैलाई पनि छैन ।
यसर्थ महादेव सबैका देवता हुनुहुन्छ, यसमा कसैलाई शंका लाग्छ र कुनै प्रमाणहरु छन् भने आउनुहोस्, खुला ढंगले शास्त्रार्थ गरौँ । गाली गरेर, दमन गरेर, धनको बलमा, जनको बलमा होइन, त्रास र आश देखाएर होइन, प्रमाणका आधारमा छलफल गरौँ, सहमती र समन्वय गरेर अघि बढौँ – “बादे बादे जायते, तत्व बोध” वेद सम्मत नै अगाडि जाऊँ । सबैको गन्तव्य भनेको एउटै हो, हामीहरुले बुभ्mने भाषामा भन्दा भगवानको दरबारमा नै जाने हो ।
कोही भेटिकनसिटी, जेरुसलम त कोही मक्का मदिना, कोही पशुपतिनाथ त कोही लुम्बिनी हुँदै यात्रा गर्छन् तर सबैको भेट हुने स्थान भनेको “तनमे मन शिव संकल्प मस्तु, तनमे मन शुभ संकल्प मस्तु, आत्मवत् सर्वभुतेषु, यहः पश्यती सहः पण्डित” महादेवको दरबार नै हो, त्यो भनेको तपाइ हामी सबैको भित्र नै छ, जाने दरबार नजाने तरबार – जय शम्भो ।
भवतु सर्व मङ्गलम् । अस्तु ।
लेखक: सत्यव्रत आध्यात्मिक जागरण मैत्री प्रबद्र्धन केन्द्रका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।